Nutrition – Page 8 – Healthy Life Journal
ဖွဲနုဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီ ဘယ်ဆီကောင်းလဲ
မေး. ဖွဲနုဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးပါလဲခင်ဗျာ။ Kyaw Zin (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှုအချိုးအရဆိုရင် နေကြာဆီ၊ ပြောင်းဖူးဆီတွေဟာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်နဲ့ ပြည့်ဝဆီပါဝင်ပြီး ဖွဲနုဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီတွေက...
အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးနှင့် စီပိုး ရှိသူတို့အတွက် အာဟာရ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး ။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးက အစားအသောက်ကတစ်ဆင့် ကူးတတ်ပါသလား ဆရာမ။ ဖြေ ။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးက အစားအသောက်တစ်ဆင့် မကူးတတ်ပါဘူး။ အသည်းရောင် အသားဝါ...
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ယူကေနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းက အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပြီး ၄၂ရာခိုင်နှုန်းက အေသွေးပိုင်ရှင်၊ ကိုးရာခိုင်နှုန်းက ဘီသွေးပိုင်ရှင်နဲ့ သုံးရာခိုင်နှုန်းက အေဘီသွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ သင်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိပါတယ်။ – အိုသွေးပိုင်ရှင်များကျန်းမာစေရန် သင့်တော်သောအစာ ပရိုတင်းများပြီး...
မြီးကောင်ပေါက်စ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာ အဓိကလိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကလေးဘဝကနေ လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော် စဝင်ချိန်မှာ အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာအုပ်စုတွေကိုစားပေးပြီး အာဟာရချို့တဲ့မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ အထူးအရေးကြီးလှပါတယ်။ (၁) ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ကစီဓာတ်) ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ထမင်း၊ ပြောင်းဖူး၊ ခေါက်ဆွဲစတာတွေက အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) ပရိုတင်း (အသားဓာတ်)...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) Glycemic Index (GI) နည်းတဲ့အစာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး စားပေးသင့်ပါတယ်။ GI ဆိုတာ ထမင်း စားလိုက်တယ်၊ သွေးထဲကို ဂလူးကို့စ်ပမာဏ တက်လာတယ်၊ နာနတ်သီးစားလိုက်တယ်၊ သွေးထဲကို ဂ လူးကို့စ်ပမာဏ တက်လာတယ်။ နို့သောက်လိုက်တယ်၊...
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးမှီဝဲပြီးနောက် စားသင့်သည့် အကောင်းဆုံး အာဟာရများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပဋီဇီဝပိုးသတ်ဆေးမှီဝဲပြီးချိန်မှာ သင့်အူလမ်းကြောင်းထဲကို ကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အားဆေး မှီဝဲတာထက် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါတဲ့ အစား အသောက်တွေကို မှီဝဲတာက ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ အူလမ်းကြောင်းမျှခြေကို ထိန်းသိမ်းပေး နိုင်တာကြောင့်...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) သကြားအစားထိုးပစ္စည်း (၁) Sugar free sweeteners (ကစီဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်၊ သကြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး) ဥပမာ- Equal -သကြား – ဝ ဒသမ ၃-၃ kcal/g သကြားပမာဏ နည်းတယ်၊ အဲဒီအတွက်...
ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့် အာဟာရ ၁၀
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အကောင်းဆုံးပေးစွမ်းနိုင်မယ့် အာဟာရတွေရှိပါတယ်။ ဒီအာဟာရတွေကို စားပေးရင် ဦးနှောက်ဟာ အကောင်း ဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ (၁) ပျားရည် ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေမယ့် အာဟာရတစ်ခုက ပျားရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်၊...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်များ အစားအသောက်ရွေးချယ်ခြင်း (၂)
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုသမားအတွက် သီးသန့်အစားအသောက်ဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ ဆီးချိုအတွက် ပေါင်မုန့်၊ ဆီးချိုအတွက် ဘီစကွတ်မုန့်ဆိုတာတွေက အချိုလျှော့လိုက်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ပြီး စားဖို့နဲ့ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ရရှိအောင်စားဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ထမင်း မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အဓိကအစာက ထမင်းပါပဲ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်မားလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးအများစုက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ထမင်းကို အဓိကစားခဲ့ပြီး ထမင်းများများစားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နှုန်းက နယ်တွေမှာ များပြီး မြို့ပေါ်မှာ သိပ်မရှိပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ နယ်မှာလည်း ဖြစ်နှုန်းအတော်များလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့...